Amaanduulaha Milatariga Soomaaliya oo sheegay in xubno Shabaab ah lagu qabtay Marka. – Hornafrik Media Network
Amaanduulaha Milatariga Soomaaliya oo sheegay in xubno Shabaab ah lagu qabtay Marka.
By Liibaan Nuur	 On Sep 5, 2018
HonrAfrik-Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed, ayaa howlgalo ay ka sameeyeen gudaha iyo daafaha Magaaladda Marko ee Xarunta gobolka Sh/Hoose waxay kusoo qabteen Maleeshiyaad iyo Horjoogeyaal ka tirsan Kooxda nabad diidka ah ee Alshabaab.
Howlgalkaasi, ayaa waxaa lagu soo qabtay in ka badan 32 maleeshiyaad iyo horjogayaal isugu jira, kuwaasi oo dhammaantood qirtay kamid ahaanshaha Nabad diidka, Waxaana qaarkood Ciidanka Xoogga ay soo qabteen iyaggoo ku hoolan falal amniga lidi ku ah.
goobta lagu soo bandhigay maleyshiyaadka iyo horjogayaasha lasoo qabtay, ayaa waxaa ku sugnaa Abaanduullaha ciidanka Xoogga Dalka S/guuto Odowaa Yuusuf Raage oo ay wehliyaan xubno ka socday xafiiska Xeer ilaalinta Maxkamadda ciidamada qalabka sida.
Abaandullaha ciidanka xoogga Dalka Soomaaliya oo la hadlay Idaacadda Codka Ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed, ayaa sheegay in Maleeshiyada argagixisada ka tirsan ee lasoo qabtay ay qirteen kamid ahaanshaha Kooxda Alshabaab, waxaana uu xusay in dhowaan Maxkamadda Ciidamada qalabka sida lasoo taagayo.
Ragga lasoo qabtay, ayaa waxaa ku jira Horjooge sare oo Argagixisada Alshabaab u qaabilsanaa fulinta dilalka qorsheysan ee ka dhaca Magaaladda Marko, kaasi oo lagu magacaabo Horjooge C/casiis Jamaal, waxaana uu qirtay inuu ka dambeeyey dilal badan oo loo geeystay dad Shacab ah oo aan waxba galabsan.
Masuul ka tirsan Maamulka G/Banaadir oo xabsiga la dhigay.
Abaabul dagaal oo laga dareemayo gobalka galgaduud.